Iintlanzi zepike: Iimpawu, indlela yobomi kunye nokuzala | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha Iintlanzi zepike. Le ntlanzi inegama lepiki kuba ligama lesixhobo sasePoland esifana nalo. Ikwanamanye amagama aqhelekileyo afana nepiki enkulu esemantla, ipiki yengca, intlanzi yengwenya (oku kungenxa yokuba intloko yayo iyafana naleyo yengwenya). Igama layo lenzululwazi ngu esox lucius kwaye inomdla wokufuna ukwazi.
Kule nqaku siza kuthetha nzulu malunga nentlanzi ye-pike, ke ukuba ufuna ukwazi yonke into ngayo, kufuneka uqhubeke ufunda 🙂
2 Ukuziphatha kweentlanzi zepike
Le ntlanzi yeyohlobo lwe-Exos. Ezi ntlanzi zihlala emanzini amtyuba namnandi. Bayakwazi ukuhlala kwezi ndawo zombini. Umbala wayo uluhlaza womnquma kwaye unamachaphaza amthubi namhlophe amhlophe esiswini. Inamabala amafutshane kwaye amile okwenziwe ngebar kwindawo yecala. Ezinye zazo zinamabala amnyama kwicala leempiko.
Ukwamkela ipike encinci kufuneka sijonge imitya emthubi enayo emzimbeni wayo. Umnqweno onayo kule ntlanzi kukuba kwisiqingatha esisezantsi se-gill yayo iyeka ukuba nezikali. Kwakhona, ukuba ujonga kufutshane nentloko efana nengwenya, sinokubona ii-pores zovakalelo. Ezi pores zihanjiswa entloko, ngakumbi emazantsi omhlathi ukuze uyiqonde ngcono imeko ekuyo maxa onke.
Kukho iintlobo zeentlanzi zepike ezinje nge Ingwe ye-Esox musquin. Kolu hlobo lweentlobo, isini sendoda nganye sinomahluko omkhulu kolunye. Amadoda ayinyumba kwaye awanakuqhubeka nokuba nenzala, ke ziluhlobo olunye lwesizukulwana. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha amabhinqa ayachuma kwaye angaphindaphindana nolunye uhlobo lwabazali.
Singazifumana iintlanzi zepike zesilivere. Ayisiyo-subspecies okanye enye into enjalo, kodwa kunjalo utshintsho olwenzeka kubemi abasasazeke ngakumbi.
Ukuziphatha kweentlanzi zepike
Ezi ntlanzi ziyakwazi ukukhula zintshukumo ukuqala ukudada ngokukhawuleza okukhulu. Oku kukhawulezisa okukhulu kubangela ukuqhuma okuncinci okwenza amaxhoba abo oyike iintshukumo zabo ezingalindelekanga.
Abasebenzisi kuphela le nto yokuqala enkulu ukuzingela, kodwa ukunqanda ukubandakanyeka kwiimeko ezisongela ubomi. Banokuhlala ubomi bokuhlala, kodwa xa befumanisa ixhoba labo, Basebenzisa ukugqabhuka ukuze babazise kwaye bababambe ngaphandle kwengxaki ezininzi.
Ngexesha lokuhamba okusetyenziswa yintlanzi ipike xa izingela, yenza ezinye zikwimo yeS. Oku ikwenza ukuze ikwazi ukudada ngesantya esiphezulu. Xa ufuna ukudodobalisa, kufuneka benze ukudada oku-C okubanceda ukuba bacothise ngokubonakalayo.
Oku kuqhuma kuyinxalenye yokuziphatha kwabo enkosi kwinyani yokuba ezi zilwanyana zinokugaya okukhawulezayo. Ngaphandle kokuchitha amandla ekucoleni ixesha elide, zilula kwaye zinokuhamba ngokukhawuleza kokuphakama kwesantya. Le yindlela abafumana ngayo elona nani likhulu lamaxhoba emini. Ngokungafaniyo nasemini bayasebenza ngakumbi, ebusuku bazolile kwaye baphumla ixesha elininzi.
Ezi ntlanzi zingafunyanwa kwindawo zokuhlala zendalo ezenziwe yimilambo yamanzi engekho nzulu. Kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba, ukuze iintlanzi ezikwaziyo ukwenza ukuqhushumba kwayo, isantya samanzi asinakuba sikhulu kakhulu okanye singangumlo omkhulu ukoyisa. Ungazifumana nakwiindawo apho kukho ukhula emachibini, kwindawo ebandayo, ecwengileyo enamatye. Ngenxa yoko igama layo liyi-pike yengca.
Ngokubanzi, ngamarhamncwa asebenzisa abalaleli njengesixhobo sokuhlasela. Bahleli phantsi kwaye bazimele phakathi kwamatye ukuze bahlasele amaxhoba abo ngokudubula ngexesha elifanelekileyo. Bayakwazi ukugcina amandla abo kwaye bahlala bethe cwaka ixesha elide ukuze abo babalaleleyo babe zezona zibalaseleyo. Oku kuqinisekisa ukuba ayinasiphoso xa kufikwa ekubambeni ixhoba nasekutyeni.
Ziyafumaneka nakweyiphi na indawo yokuhlala Unomzimba wamanzi kwaye unokutya okuninzi kubo. Bafuna iindawo ezifanelekileyo zokuzala, kuba yinto ebaluleke kakhulu ekuveliseni kwabo.
Bahlala beqwalaselwa ngokuziphatha okutyayo, ngenxa yoko iintlanzi zepike zifuna indawo yokuhlala apho zinokubalekela khona phakathi kwezityalo ukuze zingatyiwa ziindidi zazo. Bahlala ngakumbi emanzini amnandi kunamanzi amtyuba, inokubonakala kuphela kulwandle lweBaltic. Kwezinye iindawo zihlala emanzini amnandi.
Amanzi anamafu amancinci, ngcono. Oku kunxulumene nokuxhomekeka kwezi ntlanzi kubukho botyani bokuzifihla kwabanye. Zimbalwa izityalo ezikhula emanzini amdaka ngenxa yokunqongophala kokukhanya kunye namandla omsinga wamanzi, ke baya kuba nengxaki yokuzifihla kweyabo nokuzingela.
Ezi ntlanzi zikhetha ixesha lentwasahlobo ukuba zizale. Oku kunokubangelwa zizizathu ezininzi. Kungenxa yokuba ngeli xesha lonyaka banamaxhoba amaninzi okondla okanye amaxhoba abo adlula ngexesha lokufuduka. Isenokuba ngenxa yolondolozo lwamandla olungcono ngenxa yamaqondo obushushu ashushu amanzi.
I-pike fish iyakwazi ukufikelela ukukhula kwabo ngokwesini kunye nokuzala ukusuka kwiminyaka emibini ubudala. Iyazala ngexesha lasentwasahlobo xa ubushushu bamanzi bufikelela kwi-XNUMX yeedigri.
Abafazi bayakwazi ukubeka amaqanda amaninzi. Oku kungenxa yokuba baqinisekisa impumelelo yokuzala kuba ngaphezulu kwesiqingatha samaqanda abayi kufikelela ebudaleni. Nje ukuba amaqanda akhululwe ngabafazi, ukuba ubushushu bamanzi bungaphantsi kweedigri ezintandathu, abayi kuqanduselwa. Mhlawumbi oku kunika isizathu sokuba zizale entwasahlobo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokukwazi bhetele iintlanzi zepike.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zepike